हङकङेली प्रेम ! आईडी कि मन ? - भ्यालेन्टाइन स्पेशल - साप्ताहिक
तस्बिर:Jasmine Wallace Carter
“तिमीलाई हङकङ पुर्‍यायो आईडी काडैले, मलाई घाईते बनायो तिम्रै आईडीले”.....लगभग एकदशक अगाडी श्रृजित यो गीतको भाव आज पनि उत्तिकै वास्तविक लाग्छ । हङकङप्रतिको मोहकै कारण धेरैको सम्पती मात्र हैन, निस्वार्थ माया गर्ने हजारौं मनहरु तोडिएको छ । आईडीकै कारण बनावटी मन र प्रेमको अदभूत झुटो अभिनयको पराकाष्ट पनि ।
हङकङ आफैमा प्रेमको प्रतिक होईन, बरु हङकङ जस्तै हरेक विदेशी भूमि प्रेमको विपरित हुन सक्छन् जसले समयसमयमा विछोड, घृणा, तिरस्कार र बेथितीको छालहरु फैलाईरहन्छ । माया गर्ने मनले विछोडको कल्पना गर्न सक्दैन, तर पनि छुट्टिन्छ प्रेमील आत्माहरु । मायाले मात्र जीवन चल्दैन त्यसका पछाडी अनेकन अवयवहरु छन् जसले मायालाई पुर्नेताजकी बनाई राख्छ त्यसकै लागि विछोडिनु बाध्यता या आवश्यकता बनिदिन्छ ।
के पैसाले प्रेम किन्न सकिन्छ ? सवैको उत्तर सकिदैन भन्ने नै आउछ तर जीवन र प्रेमको अनेकन मोडमा पैसा कता न कता आवश्यकीय बनेर आईदिन्छ । हङकङ र आईडी नङ र मासुको सम्बन्ध भएको निर्जिव बस्तुहरु हुन् जसले चीनको स्वशासित क्षेत्र हङकङमा बसोबासका लागि अनुमति प्रदान गर्छ । आईडीको प्राप्तिसगै नागरिक सरह सेवा सुविधाका साथै आकर्षक कमाई नै हङकङको प्रमुख आकर्षण हो ।
विभिन्न देशका मानिसहरुको ब्यापार ब्यवसायको हव भएकाले पनि सम्भावना प्रचुर भएको देश हो हङकङ । यदि तपाईमा क्षमता, लगाव, सीप र लगानी गर्ने पुाजी छ, भने हङकङ एउटा उत्कृष्ट अवसर हुन सक्छ । वैकिंक सिस्टम र पर्यटकिय दृष्टिकोणले गर्दा पनि ब्यापारको लागि प्रचुरमात्रामा विदेशी लगानी हङकङ भित्रिन्छ ।
हङकङमा स्थायीरुपमा ७ बर्ष बसेपछि यहाको सिटिजनसीप (आईडी कार्ड) प्राप्त हुन्छ, यहि आईडीको वेचविखनमा लिप्त गिरोहकै कारण कतिले घरबार बिगारेका छन् भने कतिले भएभरको सम्पती ।
मलाई हङकङ लान्छु भन्दै लाखौ रुपैयाँ एडभान्सकोरुपमा दिए तर अहिलेसम्म लगेको छैन, मलाई जस्तै धेरैलाई हङकङ लान्छु भन्दै पैसा कुम्लियाएको रहेछ अहिले सम्पर्कमा छैन ।
डिपेन्डेन्सी दिन्छु भन्दै हङकङ ल्यायो, पैसा पनि अगाडी नै सवै दिए अहिले भिषा थप्ने बेलामा फेरि पैसा माग्छ ।
नक्कली विवाह गरेकै कारण श्रीमान दुखि हुनुभयो । ७ बर्ष हङकङमा आईडीको लागि दुख गरे तर अन्त्यमा छोराछोरी श्रीमान कोहि पनि मेरो आफ्नो भएनन् ।
हङकङ लान्छु,, आईडी दिलाउछु भन्दै झुटो प्रेम गऱ्यो मलाई, मेरो ईज्वत पनि गुम्यो अव कसरी समाज सामु मुख देखाउनु ?
यस्ता कुण्ठाका स्वरहरु यत्रतत्र सुनिन्छन् कति बाहिर आउछन् कति भित्रै दविन्छन् । यि त भए प्रतिनिधी पात्र मात्र । आईडी पाउनकै लागि विवाह गरिन्छ, सिउदोमा सिन्दुर हालेर, प्रेमी बनेर मिठा मिठा कुराकानीका म्यासेजहरु लेखिन्छन, फोटोहरु खिचिन्छन सवै नक्कली ।
सरकारसामु देखाईएको नक्कली प्रेम कागजीरुपमा सक्कली बनिदिन्छ, अन्त्यमा मान्छेले पाउछ फगत हङकङ बस्ने अनुमति । पैसा र सम्पन्नताको लागि आफ्नो मान्छे कागजीरुपमा अरुकै बनिदिदा पक्कै पनि मन दुख्दो हो ।
हामी विदेशी पर्व भ्यालेन्टाईन डे (प्रेम दिवस) मनाउदैछौ । धेरैले अर्काको संस्कृति नेपालीहरुले किन मनाउनु भनेर विरोध पनि गरिरहनु भएको छ । तर प्रेमले न देश भन्छ न भाषा संस्कृति, यसले मात्र ह्दयको भाषा बोल्छ अनि बुझ्छ पनि ।
पछिल्लो समय हङकङमा नक्कली विवाह गरिएको सम्बन्ध समाचारहरु आए, धेरैले सामाजिक सञ्जालमा सचेतनाको लागि सेयर गर्नुभयो, आजको दिवसमा हामी यहि सेरोफेरोलाई नियालिरहेका छौ । समाचारमा सम्प्रेषण गरिएको नेपाली शब्दले सवैको मन पोल्यो । गलत काममा आफ्नो समुदाय मुछिएको प्रति धेरैले चासो र चिन्ता ब्यक्त गर्नुभयो ।
किन लाखौं, करौडौ खर्च गरेर हङकङ आउन चाहन्छ मान्छे ? अत्याधुनिक शहर, स्वतन्त्रता र विदेशको रंगिन सपना सवैको मनमा हुन्छ । हातमा डिग्रीको प्रमाणपत्र बोकेर लगाएको जुत्ता फाटुञ्जेल विभिन्न कम्पनीको ढोकाढोका पुगेर पनि न्यूनतम ज्याला समेत नपाउदा धेरैको ध्यान विदेशले अवश्य तान्छ । फेसबुकमा देखिएका चिल्ला सडक र समुद्रको दृश्य अनि तुलनात्मकरुपमा राम्रो कमाईले स्वदेशमा बस्ने हरेकले रंगिन सपना देखेका हुन्छन् । यतिले मात्र हङकङ बसाई सुरम्य बन्दैन ।
तपाई नक्कली सम्बन्धमा मजबुत प्रमाणपत्र बोकेर हङकङ आउनुहुन्छ, सवै समयअनुसार राम्रै भयो भने त्यो तपाईको भाग्य तर तपाईको नक्कली प्रेम र विवाह सवैको सामु नक्कली बनिदियो भने ? तपाई जसको लागि यति टाढा आउने सपना सजाउनु भएको छ, उनको मनमा तपाईप्रति घृणा पलायो भने ? जसलाई पैसा र समयले किन्न सकिन्न ।
बिट्रिस साम्राज्यबाट विकसित हङकङ चीनको स्वासाशित बनेर मुस्कुराईरहदा अनेकन रुवरुपहरु परिवर्तन भए, सगै नेपाली सपना र आईडीको मोह पनि ।
लाहुरेको शहर भनेर चिनिने हङकङको आफ्नै गौरवमयय ईतिहास छ । वीर गोर्खालीको साखलाई अझैपनि मर्न दिएका छैनन हङकङका केहि नेपालीहरुले । सुरक्षाकोरुपमा बलिष्ठ र कर्मनिष्ठ मात्र नभएर ब्यापार, ब्यवसाय र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अब्बलरुपमा आफुलाई अग्रसर बनाईरहेका छन् नेपालीहरु । यहि जन्मे हुर्केका नेपाली युवाहरुको सफलताबाट सिङो देशले नै गौरव गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रेम दिवसको शुभकामना । फेरि पनि आईडीको मोहले कसैको जीवन वर्वाद नगरोस् । नक्कली प्रेम र विवाहको कारण कसैको मन कहिल्यै नफर्किने गरि नतोडियोस ।
प्रकाशित :फाल्गुन २, २०७५
‘प्रेम गीत ३’ फ्लोरमा
गुलाबी प्रणयको दस्तावेज, मेरो पहिलो प्रेम
नाम, थर ठगेर प्रेम अनि विवाहपछि हत्या
प्रेम संसार सुन सुन चम्पा सार्वजनिक
साताभरको फिल्म बजार
मितिनीकै कारण हामी एक–अर्काको भयौं है ! माघ २८, २०७५